पुरुषलाई थाहा नहुने महिलाका पाँच गो’प्य कुरा ! जानी राखौं ! – Life Nepali
पुरुषलाई थाहा नहुने महिलाका पाँच गो’प्य कुरा ! जानी राखौं !
काठमाडौं । भनिन्छ, पतिपत्नीबीच कुनै पनि कुरा लुकेको हुदैन । आफूले भोगेका तीता-मिठा सबै अनुभव साटासाट गर्दछन् । उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र समस्यामा भएमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एकअर्कालाई कहिल्यै भन्दैनन् । त्यस्तै हरेक महिलाले आफ्नो पतिबाट लुकाएर राख्ने केही कुरा छन् । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
१. प्रायः पुरुषले आफ्नो पहिलो प्रेमबारे पत्नीलाई भनिहान्छन् तर महिलाले आफ्नो पहिलो प्रेमबारे पतिलाई भन्दैनन् । अझैपनि पहिलो प्रेमीको कहिलेकाहीं याद आउने वा उ अझैपनि आफ्नो मुटुमा रहेको जस्ता कुरा महिलाले आफ्नो पतिसँग भुलेर पनि गर्दैनन् । २. महिलासँग कैयौं नीजि तथा गो’प्य कुराहरु हुन्छन् । अनौठो के भने त्यस्ता गोप्य वा नीजि विषयबारे नजिकको साथीलाई भन्छन् तर पतिलाई कुनै हालतमा भन्दैनन् ।
३. कुनैपनि विषयमा पतिपत्नीबीच एउटै मत हुदैन । आफ्नो पतिले भनेको कुरालाई मन नपरेपनि पत्नीले बाहिरीरुपमा स्विकारेका हुन्छन् । आफ्नो कुरालाई मनैमा लुकाएर राख्दछन् । फरक मत राख्दा झ’गडा हुने सोचेर प्रायः महिलाले यस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ । ४.महिलाले आफ्नो पतिलाई नभन्ने अर्को विषय पनि छ । त्यो भनेको रो’ग हो । आफू के कारणले वि’रामी भएको वा कुन रो’ग लागेको छ भनेर पतिलाई भन्दैनन् । रो’गबारे भन्दा पतिलाई त’नाव हुने सोचेर यसलाई लु’काएर राख्ने गर्दछन् ।
५. घरेलु प्रयोजनका लागि सरसामान किन्दा बचेको पैसालाई महिलाले निकै जतन गरेर राख्दछन् । यस्तो पैसालाई गोप्य तथा सुरक्षितसाथ राख्दछन् । तर पतिलाई यसबारे कहिल्यै पनि थाहा हुदैन । आवश्यक परेको बेला भने पतिलाई त्यही पैसाले सहयोग गर्दछन् । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous निकै सस्तो मूल्यमा आउँदै नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’ मुल्य सुन्दा सबै च’कित !
Next ३३ बर्षिया डि’भोर्स आन्टीलाई घुम्न जानी,फोनमा बोल्ने केटा साथिको खोजी”(फोन नम्बर र जानकारी सहित)